OTIV BOENY : Tapitra ny enim-bolana fitantanana vonjimaika, mbola tsy misy vaovao – Vaovao Madagasikara
Politique, Tia Tanindrazana
Ny 31 oktobra teo no tapitra ny fe-potoana enim-bolana nomena ny « administrateurs provisoires », izay natao hitsirihana sy hitondrana vahaolana ho an’ireo mpikambana 50 000 eo anivon’ny Otiv Boeny.15 novembre 2016
Anisan’ireo tena niroborobo vetivety ity orinasa fampindramam-bola madinika ity, ka fotoana vitsy monja dia efa tafakatra 15 ireo masoivoho teto Boeny. Maro ny tolotra ho an’ireo mpanjifa ary tsara ny zana-bola ho an’ireo nitahiry ny volany tao… Vola miliara maro no notantanin’ny Otiv ary nampitombo haingana ny lazany ny fananany ekipa mpilalao baolina kitra, izay efa notohanany nankany ivelany…
Tsy araky ny endrika ivelany nasehony anefa ny fahasalaman’ny fitantanana ny vola tao. Volana maromaro izay dia nikatso ny fahazoany mamerina ny volany tamin’ireo mpanjifa manana petra-bola. Nisahotaka izy ireo satria tsy afaka naka ny volany hamahana ny olana eo amin’ny fiainany. Tsy nanan-kambara ireo mpitantanana fa dia hoe betsaka ny mpindrana tsy mamerim-bola.
Tsiahivina anefa fa tsy maintsy mametraka antoka ireo mpindram-bola. Ary malaza tsy mandefitra mihitsy izy ireo na dia kely aza ny fahatarana. Nikatso tanteraka ny Otiv ka ireo vola notakiana tamin’ny mpindrana no mba nandoavana ny ampahany amin’ireo tompon’ny petra-bola. Betsaka ny fivoriana natao hitadiavam-bahaolana.
Betsaka ihany koa ireo olobe amin’ny tanàna niezaka nikaroka vahaolana ; miezaka manelanelana ny tambajotra Mpiaro ny zon’ny mpanjifa eto Mahajanga. Naato tamin’ny asany ny Tale sy ny lefiny ary nametraka « administrateurs provisoires ».
Nandritra ny fitantanany dia tsy nisy tatitra amin’ny asa vitany sy ny olana ireo « administrateurs » fa ny fitadiavana vahaolana no nolazainy fa ataony, vahaolana izay tokony hankatoavin’ny ny CSBF (Commission de Supervision Bancaires et Financiere).
Mbola tsy nambarany ihany koa ny olana na ny mety ho tompon’andraikitra amin’ny fanodinkodinam-bola izay ahiahian’ny rehetra ho nisy tao amin’ity Otiv ity. Io koa mantsy no isan’ny iraka nomena ireo mpitantana vonjimaika.Nisy ny fiakarana tany an-drenivohitra sy fihaonana tamin’ireo antanantohatra eo anivon’ny Fitondram-panjakana hatramin’ny Filohan’ny Repoblika nefa hatreto dia mbola tsy misy vahaolana nambara mihitsy.
Roa herinandro izay no tapitra ny fe-potoana niasan’ny « administrateurs provisoires » io ka miandry ny tatitra hataony ireo mpanjifa, izay mitaintaina mafy amin’ny volany.